Umntu nge-impendulo yakho - yintoni zabo igama. (kwi-Italian, ilizwi kwi-isijamani) - IVIDIYO INCOKO. Dating-intanethi!
Umntu nge-impendulo yakho - yintoni zabo igama. (kwi-Italian, ilizwi kwi-isijamani)
Kwaye xa umntu ethetha kuwe, wena literally kwenzeka kuye
Xa kufuneka ahlangane umntu nge intetho, wena iyangxola"wena"ukuba ababukeli bomdlalo bangeneKodwa oko ufuna umnxeba ngayo umntu kunye yakhe drive, njengoko ziphakathi iminyaka okanye nokuqheleka science fiction iincwadi? Kukho esinye ubuncinane ilizwi. Kwi-elinesixhenxe century, wena baba eliphetheyo ka-iinkosana nezinye high-ranking amagosa ka-obunganeno udidi (Ihrzen).
kuba phezulu-ranking dignitaries kwaye feudal lords, i-pluralism ye-Majestatis waziswa kulo lonke Yurophu.
Kwi-uluvo umgaqo kusetyenziswa endaweni personal isinye pronouns, oko kukuthi endaweni apho ndine sine kwaye kufuneka zezenu. Century waba isihloko Ngayo, minerals idla bamthwala yi-superiors kwaye lords yombuso:"Boy, ngonaphakade uthuli kwi imbiza. ndiqonda evela Kuye, Bawo,"ngeli noble oonyana kuhlangatyezwana nabazali babo. I-minerals baba ndivuma kwi-isijamani ulwimi okanye kwi-embindini. Centuries eyadlulayo.
Ngokufanayo, abantu baba kwi umyinge imiqathango kunye clergy kwaye nobility, ngexesha le loluntu H waba ngokulinganayo! kwi-isininzi kunye kusenokwenzeka ukuba kunye namanye amagama eencwadi ezifana"mein Herr".
Ngendlela eqhelekileyo lwasemaphandleni bonke kude kube sekupheleni eliphakathi iminyaka, wonke umntu kwi-genre kwakuyiminyaka kuqala, oko akunjalo kufuna nayiphi na indawo ethile ukuze babe igcine, kuquka foreigners. Kude kube ngoku, lento rare ahluka-lwasemaphandleni isijamani-ukuthetha imimandla ye-Saale, umzekelo kwi-Bernese Oberland kummandla okanye kwezinye iindawo Tyrol. Kwimeko pesca, Epoca waba appellative ngayo, ihrzen iqhele kanjalo widely asetyenziswa bourgeoisie.
Umzekelo:"Bawo, ndinqwenela okokuba wena ubuya kwenza Kum a umsebenzi ngenxa yam ulonwabo.Irzen", apho ingu elisetyenziswe apha naphaya kwi-southwestern Germany, ingakumbi kwi-Baden, Swabia, Palatinate, Hesse kwaye Rhineland, ngokunjalo kwezinye kwiindawo Senegal, ingakumbi Bern-Germany kwaye Alsace.
Kubalulekile kananjalo efumaneka kwi-enjalo ulwimi Kweziqithi njengoko Volga-isijamani kwaye kazakhname-isijamani. Kubalulekile ikakhulu esetyenziswa kwi dialect okanye dialect enxulumene ulwimi kwaye idla weva njengoko i-intermediate iqonga phakathi Tu kwaye gleig, kodwa unako kanjalo kubekho enye umbuliso (njengoko kwi-Bernese isijamani okanye variants ka-isijamani bass). Kwi end, zonke kubo wachaza yi-ulwimi-zembali kwaye yenkcubeko imiba jikelele Darcy, Minerals, Irsen kwaye egleig, tshintshela a Umgama kuba Nam.
Phakathi kwabo kukho amalungu osapho kwi-isininzi
Ngoko ke namhlanje sisebenzisa kwi-Italy, xa ndiya ufikelele ubukhulu umgama."Thina"lithetha"lowo doctor njengoko sisebenzisa namhlanje."Molo, Martin. Ngubani igama lakho, ngenxa yokuba xa umntu uthetha nge"wena"okanye"bona".
Ukuba umntu uthi"wena"omnye umntu, ngoko ke ngu"Ewe", ukuba uthi"Ewe", ngoko ke gleig utshintsho, kodwa"wena".
Kukho amaxesha xa abantu abo bafuna ukuba abe nani. Kwaye abanye babo ufuna kuba ngomhla we-personal mimiselo. Okanye ngenye indlela, omnye kuni, nani okanye nge intetho. Oku ngokwaneleyo kuba kum, akukho mcimbi ukuba umntu unika nam kude kuwonke-wonke okanye formally evela kuwe, ngaphandle kokuba umntu buhle kunye amehlo akhe unako ukuthetha ngayo, ndiza musa bona na iingxaki ixesha elide yentsebenziswano. Kuba mna, ukwanalo nto ukwenza kunye nentlonipho ukuba ndimele kubonisa okanye undixelele malunga nayo. Ewe, kuba nam ke okungakumbi a ifomu politeness ngakulo abantu andiyazi - ndiza Dating okokuqala. kwaye ufumane kusetyenziswa ngayo xa ufumana ukubonelelwa phakathi kwabo. Ukususela ke ngesingesi, ke kakhulu lula kunokuba"Yous Ewe"kuba nabo, ngolohlobo kubalulekile kuba kuni. Awunokwazi get ukwazi umntu ukuba lula. Kukho abantu abo bakholisa react xa unikeza ngokwakho ukuba ababukeli bomdlalo bangene. mhlawumbi endala kwisizukulwana. Kancinci kakhulu elinovakalelo. ukuba abantwana react, ukuba bamele ngothando. ngoko Jason ukuziphatha kwe, okokuqala, kwaye thina musa ufuna admit kuyo. Ngubani igama lakhe.
kukho enjalo ilizwi, oko ndijonge, kuba kum ngolwimi.
kodwa akunyanzelekanga ukuba baqonde: molo, njani ingaba wena? Kulungile, mna, nangona abantu abaninzi kusetyenziswa imiqathango kunye amagama, kodwa ukuba mna ngamanye amaxesha zisetyenziswa imiqathango kunye amagama, ndiyazi ukuba idla hayi ukuba wam confrontation nawe okanye gleig utshintsho.
njengoko ixesha elide njengoko umxelele uluntu malunga yakho ubudala. kwaye ukuba umxelele kwabo. kulungile, gqo, akunyanzelekanga ukuba ingqondo usebenzisa igama amagama, mna nje andazi njani ke ndizaku kuba wam isibali-jikeleziso. ingaba ufuna ukwenza oko? apho, uza kuba formally offended ukuba usebenzisa imigaqo kunye amagama kunye umfana umntu owenza ubuyile kuwe. kwaye, ngaphezu kwazo zonke, njani ubudala ingaba wena? Ndifuna elinye ilizwi kuba umsebenzi, ezifana ukuba umntu ufumana encedisa ngexesha shenxisa, kwaye imali bafumana. Kukho kanjalo ngakumbi ngendlela efanelekileyo ilizwi, njenge auxiliary okanye icala. Emsebenzini, yena ithetha nam malunga oludala colleague, soloko abayo owakhe igama, kodwa ngexesha elinye formally. Mna fumana le ngenye engaqhelekanga, kuba ndiyazi umahluko. Ndingathanda ukwazi indlela Princess (oko kukuthi, ngukumkani ke intombi) uphendula ziphakathi iminyaka (Italy). Lento wathi kuphela ngenxa yokuba kukho, umzekelo,"molo, Yakho Highness"okanye ezinye ishicilela. Wam okulungileyo diabetic umhlobo, izolo ngexesha lam horse riding tournament yena ngesiquphe wawa, ebangela kuye, ukuba bathe hypoglycemia. Xa ambulance bafika kwaye kugqirha wathabatha okulungileyo care kuye kwaye bafuna kuye ukuya esibhedlele, ndaya kwi-ambulance. Eli qela kwaba mnandi kakhulu, kwaye ndaqaphela ukuba umhlobo wam waye soloko kwi efanayo mimiselo, nangona kunjalo ukuze abe sele ubudala (ihlala ingu kwangethuba).
Kwi-esibhedlele, nangona kunjalo, yaba enye indlela jikelele, apho doctors kwaye zonyango abasebenzi nje hlala.
Xa umhlobo wam yaphendula yathi kum, wathi ukuba oko kukholisa kwenzeka kuye (yena sele kuza ukuya esibhedlele ngokusebenzisa RTW kunyaka volt hypoglycemia), ukuba RTW crew zinikezelwe ke phezu kwenu, kwaye esibhedlele abasebenzi bafumana kubhaliwe solemnly. Ingaba oku, okanye kutheni ngoko ke, ngokufanayo ukuba rescue inkonzo ibonelela uqeqesho uluntu kwaye esibhedlele kuba young patients, zonke ngaphandle okukodwa formally. Ukuba umntu iimpendulo kwaye ngomhla wokuqala-igama qho ngonyaka, umntu uza kuqhubeka impendulo, okanye kuya kuba impolite ukuba baye ke okokuba uqeqesho kwi-wonke. Ndicinga ukuba xa umntu sele polite zabo impendulo, ngoko bamele bonisa ilungelo icala umbuzo. Ukuba uya kuwa phantsi ekupheleni, bekuya kuba mnandi ukuba ngaba kufunyenwe umntu othe oninika ekuhambeni a incoko. Nangona kubalulekile obvious ukuba stranger akusebenzi umnxeba ababukeli bomdlalo bangene"wena", ufuna ngokwenene ilungelo. Emva zonke, alikwazi ukwahlula i-ulwim ilizwi ukuba ahlangane umntu anombhalo"KUWE."uyakwazi ngqo sebenzisa isemthethweni ulungiso ukuba umntu ubizwa ngokuba"wena"xa wena musa ufuna.
Ukuba ufuna kuhlangana umntu Nenkosi ke umfazi, yena uphendula kwaye ithi:"ndim Indlela"kwaye ubiza igama lakhe, abe ngefowuni-wonke"ingaba"lo mntu.
Ndinguye ngoku uthatha i-Italian ulwimi kunjalo e VHS kwi-Berlin, kwaye utitshala wethu (Italy, kwaye lowo ingu kakhulu young)kunye isimbo igama. Kwaye ngoku bazalwana umbuzo bonke Prussia: Formally kwi-Italy, umntu sibhekisele ngomoya wakhe wokuqala igama. Okanye ndinako yenze ngoku, ngaphandle worrying (kwi-Italian kwaye isijamani). Mhlekazi Umnu Dama, mna zithe yokubhala kuwe, kodwa kuphela nkosi Frau ubhala. Kwaye singena utyikityo"abenu ngenene", ke i-isithuko. Mna anayithathela weva ke nicinge ukuba abe. Ukuba bekuzakufuneka utitshala, ndiza kuthi ukuba ubuya kwazi ukuba ndincede.
Kodwa xa ufuna ngoku ngaphezu utitshala, njengoko baya kusetyenziswa kuthi.
Ngaphandle, unako ukunceda kum. Okanye unganceda kum. Ngenxa yesibini omnye ikhangeleka ngathi lokuqala into endifuna ukuyenza kunye nawe. Wam wesibini ingxaki: ukuba ndine ngaphezu omnye utitshala kwi-phambili kum, umzekelo, abafundi nootitshala, ke nina bahlala kwi-umbuliso zomthetho okanye hayi. Ngoko ke, ukuba kukho izinto ezimbalwa abantu bazibiza-wonke"wena"kwaye ezimbalwa kulandelwe okkt kwaye idilesi wonke umntu, ndiya kuba ndonwabe. Ukuba omnye umntu wenze omnye umntu, ngoko ke musa idilesi kwabo, kodwa kuya kuzo. Umzekelo, umntu kwaye subjunctive zisetyenziswa: Yintoni ufuna ukubiza umntu olilungu rhoqo dissatisfied kunye oko baya kuba? Kukho ngokuqinisekileyo ilizwi kuba oku kwi-isijamani. Yintoni ufuna ukubiza umntu abo lies. Ngoko ke, umntu lowo unako ukuba ngokucacileyo ngu-hayi worried.
Nceda ubhale kum onke amazwi uyazi. Ndiya kusoloko khangela ezahlukeneyo iinguqulelo kwindlela thanksgiving mini. Upelo incinci, omnye ngu big, kwaye ndingathanda ukwazi into ilungile ukuba ngaba impendulo kum ngqo kwaye umxelele"wena"ababukeli bomdlalo bangene kulo myalezo.
Dating ukusuka Barranquilla: a Dating site Apho unako
i-intanethi ividiyo incoko amagumbi Dating dating incoko ukuhlangabezana a guy ngaphandle ividiyo incoko ukuphila ividiyo iyaphephezela incoko free Dating site Chatroulette engeminye ividiyo unxibelelwano intshayelelo ividiyo incoko erotic free incoko ividiyo Dating